Channel-In-a-Box (နေ့ကို ing) | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » channel-in-a-Box ကို (နေ့ ing)
channel-in-a-Box ကို (နေ့ ing)
ဒါဟာကဲ့သို့သော, ငါ "လက်ဝှေ့နေ့" ၏သတိပေးနေပါတယ်ခရစ္စမတ်နီးကပ်လာပြီနှင့်ရဲ့ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (နှင့်ကနေဒါ, သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်) တွင်ကျင်းပထင်ရှားတဲ့ "နေ့-ပြီးနောက်-ခရစ္စမတ်" အားလပ်ရက်ကြောင်း ... ဒီခေတ်သစ်အသက်အရွယ်အတွက်ကြောင့် မျှသာသူတို့အားနိုင်ငံများရှိဘဏ်အားလပ်ရက်ဖြစ်လာသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ကြည့်ဖို့စွန့်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြသည့်အခါယင်း၏ဇစ်မြစ်, နက်ဖြန်နေ့၌ပြီးတော့လူတိုင်း၌ကျွန်ခံခဲ့ရသောအခါရှေးကာလ၌, ကျွန်တို့ခရစ်စမတ်နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင့်ဖြစ်ထင်ပေမယ့်ခဲ့ကြ "လက်ဝှေ့နေ့။ " ဤအရပ်မှ - မိသားစုများ, မိမိတို့အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့်သူတို့၏ "ဆုလက်ဆောင်သေတ္တာများ" နဲ့တင်ဆက်ခဲ့ကြ
လက်ဝှေ့ နေ့အတော်လေးခရစ္စမတ်သည်မဟုတ်, အဲဒါကိုအားကြီးသောအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သော။ လက်ဝှေ့နေ့, Channel ကို-In-A- လိုပဲသေတ္တာ ဒါကြောင့်လည်းအတော်လေးအပြည့်အဝအရွယ်အစားစတူဒီယိုသည်မဟုတ်,, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအားကြီးသောအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သော။ သင်ဘယ်လိုတစ် box ထဲမှာတစ်ဦးစတူဒီယို fit နိုင်သလဲ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးအခြေခံပေါ်တွင်သိသိသာသာအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ထိရောက်စွာတစ်ခုထိရောက််အထုပ်ရှိသည်ဖို့တစ်ခရီးဆောင်သေတ္တာသို့အလုံအလောက်ထုတ်လွှင့် BOFFO ရနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့စတူဒီယို၏အာရုံပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာအမျိုးမျိုးပွီးမွောကျနိုငျသညျ။ တစ်ဦး box ထဲမှာသင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းဥပမာတင်းကြပ်စွာအသံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းနှင့်မဖြစ်မနေအဖြစ်ပါဝငျသောခရီးဆောင်စတူဒီယိုထက်သင့်ရဲ့အသံတွေကိုနှင့်သင့်ဂီတနှင့်အတူအများကြီးပိုလုပ်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏ရေဒီယိုဘူတာရုံများအတွက်ထိရောက်သောဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာအရနိုငျသညျ, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သောဗီဒီယို server ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
Channel ကို-in-a-Box ကိုပိုပြီးစီးပွားရေးအရဖြစ်နိုင်တစ်ဦးက start-up, မီဒီယာအုပ်စုအတွက် Full-စုံတဲ့အုတ်နှင့်အင်္ဂတေတည်ထောင်ခြင်းထက်ဖြစ်သော်လည်းကြောင့်အရာအားလုံးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့, အသံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအပြည့်အဝစတူဒီယိုပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိရန်လွယ်ကူသော access ကိုဆိပ်ကမ်းများနှင့်ရမှတ်နှင့်တကွ, ဦးနှောက် IS နားရွက်များ (အသံပစ္စည်းကိရိယာများ) နှင့်၎င်း၏ မျက်စိ (ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများ) သို့မဟုတ်ခွငျးအားဖွငျ့ telepathy (ဆိုလိုသည်မှာ, အင်တာနက်) ။ ဦးနှောက်သတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်နှင့်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကွာသိုလှောင်ရှေ့မှာပိုပြီးအလွယ်တကူနားလည်လွယ်စေသည်။ အဆိုပါ Channel ကို-in-a-Box ကိုသို့ကုိုကြည့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏အတော်လေးနည်းနည်းရှိပါတယ်။ အသေးစားကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောသူတွေကိုမဟုတ်; တစ်ခုထူထောင်စတူဒီယိုတစ်ဦး / တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုရန်လက်ပေါ်အနည်းငယ်စောင့်ရှောက်နိုင် ဂြိုဟ်တု တည်နေရာ (s) ကိုသို့မဟုတ်အရေးပေါ်၏အမှု၌တည်၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာတိုးတက်လျက်ရှိသည်အဖြစ်ကစတူဒီယို-in-a-Box ကို concept ကိုပထမဦးဆုံးအာရှတိုက် & ဥရောပများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိစတင်ခဲ့သည့်အခါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သကဲ့သို့နီးပါးအဖြစ်အများအပြားရိုးရှင်းသော skip အဖြစ်မလိုအပ်ပါဘူးင် သငျသညျပြီးသားတစ်ဦးအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်နည်းပညာ၏ဤ nifty နည်းနည်းအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမယ့်လည်းစရိုက်ကြောင့်ပယ်ချလျှင်, ဖြစ်ကောင်းကအခြားကြည့်ယူဖို့အချိန်င်; ဆာဗာအပေါ် Switcher ကနေပလေးအောက်၏တစ်ခုလုံးကို sequence ကိုနှင့်အတူ (အကျိုးဆက်ကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်) တဦးတည်းအသေးဧရိယာသို့ pack မှာတစ် miniaturized စတူဒီယိုရှိခြင်း, ပြီးတော့ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပေါ်ရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်၏စီးပွားရေးကို (နှစ်ဦးစလုံးငွေရေးကြေးရေးနှင့် Spatial) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အသံနှင့် routing ကိုအသုံးချဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ (ဦးနှောက်) တွင်သွားကြဖို့အချို့သောထိပ်တန်းထစ် software ကို (အတှေး) လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ Channel ကို-in-a-Box ကိုထုတ်လွှင့် options နဲ့စွမ်းရည်ကိုတစ် cornucopia ပေးပါသည်။ သင်တစ်ဦးခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာ fit နိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုနှင့်အတူဟာ့ဒ်ဝဲ၏တစ်ဒါဇင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအစားထိုး။ သောကြောင့်ယင်း၏ All-In-One သဘောသဘာဝ, အထုတ်လွှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြောင့်ထားရန်လျော့နည်းဝါယာကြိုးရှိပါတယျ; ဒီဟာ့ဒ်ဝဲတဦးအပိုင်းအစအတွက်ပြည်တွင်းလုပ်အပေါငျးတို့သလိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်သော (ပြင်ပ) ဝါယာကြိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာအရည်အသွေးကို Channel ကို-in-a-Box ကိုအမျိုးအစားထုတ်ကုန်ထွက်၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ REMO 22 (နှင့်ပိုပြီးခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်ကာယင်း၏ပိုကြီးပိုပြီးအမြဲတမ်းဝမ်းကွဲ (စ) VDESK PRO + VDESK, LTD, VDESK PRO,) ဒီအတန်းထဲတွင် Rushworks တီဗီများအတွက်စျေးကွက်ဖို့တင်ပြကြသည်။ အဆိုပါ REMO 22 က (cue ကြောက်စရာ / သိသိသာသာဂီတ) လေကြောင်းလိုင်းအိတ်ကိုကိုင်တွယ်နှင့်အတူမွေးရာပါအန္တရာယ်များကနေချွေတာ, သယ်အပေါ်အိတ်အများဆုံးစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများအပေါ်များအတွက်သင့်လျော်သောနေရာများသို့ fit နိုင်အောင်ခရီးဆောင်ပါ! အဆိုပါ REMO 22 တစ် 22 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်မော်နီတာပါတယ်။
ဤရွေ့ကားစနစ်များ4သို့မဟုတ် 8 ဝါကြွားခြင်း HDအဆိုပါ REMO 22 နှင့် 8 သို့မဟုတ် 12 ဘို့ / SD က-SDI သွင်းအားစု HDအဆိုပါ VDESK ဘို့ / SD က-SDI သွင်းအားစု; နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်, သွင်းအားစုများက ISO ဖမ်းယူ format နဲ့-နိုင်ခဲ့ streaming များနှင့်အသံဖမ်းနှင့်အတူ Multi-layer ကို DSK, dual-Clip ကစားသမား, Pip နှင့် Chroma သော့ချက်များ, အပြည့်အဝရွေ့လျားမှုထပ်လွယ်ကူအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, အပြင်ယခုရရှိနိုင် - ထိုအပေါငျးတို့သတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Interface ကို သောဤဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းထုတ်ကုန်များ၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ဖြည့်စွက်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန် (အသစ်ဒီနှစ်) ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Interface ကိုအပါအဝင်အတူတူဆော့ဖျဝဲပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်ရဲ့ပြီးသားလန်းလာသောသတ္တိရန်ဤတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထို့အပြင်ဤနည်းအေးမြသည် ... နီးပါးမည်သူမဆိုကင်မရာများနှင့်ပြင်ဆင်ရန် manipulate နှင့်စီးဆင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Interface ကိုနှင့် PTZ ကင်မရာများလည်ပတ်ရန် Joystick တစ်ခုပေါင်းစပ်နှင့်အတူကုန်ပြီ။9ကြိုတင်ပြင်အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီကိုကင်မရာ (ပေါင်းကို manual ထိန်းချုပ်မှု) အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Rushworks တီဗီရဲ့ Channel ကို-in-a-Box ကိုထုတ်ကုန်စံစက်မှုလုပ်ငန်းအမှတ်စဉ် protocols များ (RS232, RS422 နှင့် RS485) ကိုသုံး၏နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများ။ ကင်မရာ interfaces လက်ရှိအချိန်တွင်၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါ ကို Canon, Panasonic က, ဒါမှမဟုတ် Sony က ကင်မရာများ။ လိုချင်သောရလာဒ်ကဒိ Inputting ဟာရလာဒ်ကဒိဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲမှတဆင့်ကုန်ပြီ, ပြီးတော့သင်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်တင်နေကြသည်။ တွဲကင်မရာအသုံးပြုမှုကိုသင် Rushworks ၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြု Doubletake ရရှိနိုင်မယ့် 350 ဒီဂရီအမြင်ရှိပါတယ်အရာကင်မရာကိုအားလုံးအတှကျ PTZ ထိန်းချုပ်မှု။ ကို formats ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသံသွင်းရာတွင်လွယ်ကူသည်။
သင် REMO 22 ဖွင့်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏တွေ့ပါလိမ့်မယ် HD/ SD က-SDI4(သို့မဟုတ် 8 သွင်းအားစု), တစ်ခု (optional) ပေါင်းစပ် output ကိုကဒ်နှင့်အတူ HDMI component, နဲ့ Y A / C ဆက်သွယ်မှု။ အဆိုပါစနစ်အမြန်နှုန်းမြင့်ပြင်ပသိုလှောင်မှုရဖို့ Gigabit Ethernet နဲ့ USB 3.0 အသုံးပြုသည်။ ဆက်သွယ်မှုလျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယူနစ်တစ်ပြိုင်နက်, ကြီးမားတဲ့အမြင် screen ပေါ်မှာပြသထုတ်လွှင့်မှုအတွက် modulated နှင့်လုံးဝနီးပါးမဆို Display ကို device ကိုဖမ်းယူနိုင်ရလဒ်ရှိခြင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Adobe Premiere နဲ့ Photoshop ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Non-linear တည်းဖြတ်ရေးနှင့် DVD ကိုမီးလောင်ရာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Multi-layer ကိုဂရပ်ဖစ်, CG ပြသမှုနှင့် Chroma-key ကိုနှင့်အတူ MPEG-2, H.264, AVI နှင့်, Quicktime file ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင်။ အရင်းအမြစ်များ On-screen display အဖြစ်ကောင်းစွာ, ရရှိနိုင်ပါသည်; Wipe အတူအုပ်စုခွဲ Screen, အရည်ပျော်, PIP နှင့်ပိုပြီး။
အဆိုပါ software ကိုချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာမှသူ့ဟာသူချေးငှားသည်, သငျသညျစာသားသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်အမြင်တစ်ခုခုနှင့်သင်၏ဖိုင်များကိုမှတဆင့် browse နိုင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာများအတွက် default အဖိုလ်ဒါရှိပါတယ် CGs, pics နှင့် Clip ။ ရှာဖွေမှုရိုးရှင်းသောများမှာ - သင်ဖွင့်စာရင်းများကိုများစွာသောလူလုပ်, သူတို့ပြန်စီနိုင်ပါတယ်; ဖိုင်ကိုစာရင်းများကိုပြန်လည်နေရာချထားရိုးရှင်းသော Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ workstyle သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ REMO ယင်း၏ input ကိုသတင်းရင်းမြစ်နှင့် PGM & PVW တစ်ခုမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ display ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရဲ့အခြေစိုက်စခန်းဂရပ်ဖစ် PNG ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိလျှင်အလွယ်တကူ, BMP သို့မဟုတ် JPG နှင့်အတူအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ပရေတာကိုအလွယ်တကူရိုးရာ interface နဲ့အသစ်ကထုတ်လုပ်သူ interface ကိုအကြားနောက်ကျောနှင့်ထွက်ပြောင်းနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ interface ကိုမှရွေးချယ်ဖို့အခြေခံကွင်းအပြင်အဆင်၏နံပါတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ကုမ္ပဏီအခြေခံ program နဲ့မပါဝင်သောထပ်တလဲလဲနေရာရှိပါတယ်လျှင်မူကား, Rushworks ဝမ်းမြောက်စွာ program ကိုရန်သင့်စိတ်ကြိုက်နေရာ add ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လုပ်သူ interface ကိုအတူ, သင်အမြင်မျက်နှာပြင်ကနေကင်မရာများလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ကင်မရာအော်ပရေတာနှင့်အတူဝေးလံခေါင်သီ cams ၏အသုံးပြုမှုကိုရောမွှေပါ။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်မျက်နှာပြင်တွင် icon များ, အလွယ်တကူသရုပ်ဆောင်၏ရုပ်ပုံဖြင့်အစားထိုးထားတဲ့အခွက်တဆယ်, ကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အိုင်ကွန်ရှိတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကသူတို့သိမ်းပိုက်ကြောင်းကိုသင်၏နေရာ၌အရာအရပျဖို့သင့်ကင်မရာများသတ်မှတ်နိုင်သည်; သောနောက်, သင်ရိုးရှင်းစွာ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်ကင်မရာများဖွင့်ဖို့အိုင်ကွန် taping ၏ထို option ရှိသည်။ အခုအသစ်အမြင်ဖို့ကင်မရာများ၏ပွနျလညျပွုပွငျများသောအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအကြောင်းကိုကြာပါသည်။ အဆိုပါထုတ်လုပ်သူရဲ့ Interface ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူအနေနဲ့တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်သင်္ဘောသားကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုမှသူ့ဟာသူချေးငှားသည်နဲ့ options တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးထားပါတယ်။ YouTube ကိုသင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုများတစ်ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်:
အဆိုပါ REMO 22 ဝယ်ယူနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် (ကင်မရာများအသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းထားတဲ့အပေါ်အခြေခံ) အခြို့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်; အဆိုပါ MUX box ကိုကင်မရာက controller ကိုနှင့်အာဏာ; DEMUXs (ထို MUX ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီ PTZ ကင်မရာတဦးတည်း) နှင့် DC ကအာဏာနှင့် RS6 အဘို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏-ကပ်လျက်တည်ရှိ RG5 နှင့် CAT422 ဖြစ်သောသင့်လျော်သည့်ကင်မရာကေဘယ်လ်, အပိုဆောင်းဗီဒီယိုကို input type ကိုများအတွက်ယခင်က-ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကဒ်နှင့်4သို့မဟုတ် 8 input ကိုဆိပ်ကမ်းများ၏ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူ။ မှာညွှန်ကြားချက်လက်စွဲမှာ peek ကိုယူ: www.rushworks.tv/UserGuides/VDESK-REMO_UserGuide2014.pdf ။
2001 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, RUSHWORKS တန်ဖိုးနည်း, high-performance ကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, အလိုအလျောက်နှင့်ဗီဒီယို streaming များဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါသည်။ ဤရွေ့ကားအရွယ်မှာ and Extensions ဖြေရှင်းချက်တံစို့လိုင်းများ, အစည်းအဝေးများ, ပွဲများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, Cable ကို, အသံလွှင့်, ကိုးကွယ်မှုများ၏အိမ်များအတွက် "အားကောင်းရိုးရှငျး" အလိုအလျောက်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ networked video နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဆာဗာများနှင့်ကုတ်ဖြည်သည့်အရာများပေါင်းစပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းအလိုအလျောက်စနစ်များ, ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ, အသံထောက်ခံမှုစနစ်များ, ကြီးမားတဲ့ screen ကိုမော်နီတာ, ဗီဒီယိုတင်ဆက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အခြားအစည်းအဝေးအခန်းထဲမှာ AV စနစ်ထောက်ခံမှုအပါအဝင်မြို့အစိုးရချန်နယ်များအတွက် turnkey ပေါင်းစည်းမီဒီယာဖြေရှင်းနည်းများ, ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်ပြီး။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မှာကသူတို့ရဲ့ website သို့ကြည့်ရှု: www.rushworks.tv
audio ကျောပိုးအိတ်စတူဒီယို အသံလွှင်း channel-in-a-Box ကို အိတ်ဆောင်စတူဒီယို REMO routing RushWorks တီဗီ သိုလှောင်ခြင်း VDESK 2014-11-26
ယခင်: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးအိုင်စီတီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကာဗွန် Footprint နေရပ်လိပ်စာမှ Consortium စည်းရုံး
နောက်တစ်ခု: Dolce အားကစားသတင်းနှင့်အားကစားများအတွက်လုပ်ငန်းစတုရန်းမိုင်ဝယ်ယူသည်